Isiphandla sezikhali sesiFundazwe saKwaZulu-Natali
Isifundazwe saKwaZulu-Natali silinde kuze kube ngu-2004 ngaphambi kokugunyaza i-Coat of Arms entsha. Ngesikhathi sokhetho lwezinsuku eziyishumi, uKwaZulu-Natali wasebenzisa izingalo ezivela eNatali naseKwaZulu, ezihlangene. Isiqubulo, esibhalwe phansi ngesiNgisi, uMasisikume Sakhe, okusho ukuthi, "masisukume futhi sakha".
I-blazon ngaphansi kweNgubo yezikhali ibhalwe ngesiNgisi nangesiZulu, okokuqala ngqa emlandweni waseNingizimu Afrika ukuthi i-blazon iboniswa kunoma yiluphi ulimi ngaphandle kweNgisi nesiBhunu. Kusukela phansi kukhona i-Nguni isihlangu nenyoni yepharadesi (i-Strelitzia reginae) evezwe kuso. Ibhande elihlaza elimhlophe eliyisihlangu limelela izintaba zaseDrakensberg, emngceleni wesifundazwe neLesotho neFree State.
Uhlaza lumelela umbala wezwe jikelele weSifundazwe saKwaZulu-Natali. Ukuwela ngemuva kwesihlangu kuyisisindo kanye ne-knobkierie, kokubili izimpawu zendabuko ezigunyaziwe kakhulu. Isihlangu sisekelwa yizingonyama (Leo namuhla) esasiyingxenye yamandla asekudala aKwaZulu futhi simelela igunya leNkosi yamaZulu.
Ngakolunye uhlangothi lwesihlangu kungumnyama omnyama noma i-gnu (i-Connochætes gnu), eyayiyingxenye yezimpawu zeColony neSifundazwe saNatali kusukela ngo-1870, futhi ingxenye yesigqoko sayo kusukela ngo-1907. Izikhali, i-gnu iboniswa njengeyande kakhulu kunokuba isebenze, njengezingalo zangaphambilini.
Ngaphezulu kwesihlangu i-crest ifakwe njengendluvu ye-beehive. Lesi kwakuyisakhiwo sendabuko esasetshenziselwa ukwakha imizi ye-abeNguni. Lezi zakhiwo zazifana neNgun ningizimu yezinto ezazijwayele ukubizwa ngokuthi iTranskei neCiskei. Izindlu zalezi zindlu zazivame ukwakhiwa izindlu eziningi, enye yinduna yendlu futhi eyodwa ngayinye yabafazi bayo nezingane. Lolu hlobo lwesitayela sokwakha manje selushiywe kakhulu, kodwa lungabonakala emadolobheni omlando eduze kwaseShaka's Kraal.
Isihlangu Sesibonakaliso - Nguni Shield
Ukukhethwa kwesihlangu kubonakala kahle njengoba kubonisa amasiko weZulu yamaqhawe kanye nabaphambili bawo. Lesi simo sokuzivikela sasiqale sisebenziswa nguNgNguni njengesihlangu esikhulu (2 m ubude) lapho umlindi efihle khona lapho kukhonswa khona imikhonto ende. U-Shaka uqeda lolu hlobo lwesihlangu kanye nomkhonto omude, esikhundleni sakhe kokubili ngesihlangu esifushane cishe ku-1 m, ukuze sisetshenziselwe ukulwa ngokuhambisana nomlenze (noma umkhonto omfushane).
Manje, ngisho nezihlangu ezincane zijwayele ukusetshenziselwa ukuncintisana kwamadoda aseNguni abancane. Izihlangu zendabuko zenziwe nge-cowhide futhi ziqiniswe ngezinduku, ezingasuswa ukuze zithwale kalula uma zingasetshenziselwa ukulwa noma imikhosi. Ama-Thongs abambe izinti endaweni, ngokuvamile embala okwehlukile kulo lonke isihlangu.
Isibonakaliso Sembali - Inyoni YePharadesi (Strelitzia reginae)
Imbali ye-crane noma inyoni yemifula yipharadesi (S reginæ) kwakuyisibonakaliso esiphezulu sezimbali zesifundazwe saseNatali. Kuyinto isitshalo somdabu ezigodini uma iZululand eduze nogwini, kodwa ayitholakali eNdala Colony, eningizimu yoMfula iTugela, kodwa itholakala ekhula eTranskei naseMpumalanga Kapa, ​​futhi itholakele kakhulu emasimini kulo lonke izwe. isifundazwe.
Ngokumangalisayo, kuyisimbali esisemthethweni seDolobha laseLos Angeles eCalifornia, futhi likhula lapho, mhlawumbe lisuka emasimini asezindaweni zasemakhaya.